Umhlobiso - Imisebenzi yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe (Ikhasi 2)
Uma uthanda ukugaywa kabusha, lapha unebhodwe elincane elenziwe ngezitsha zengilazi kanye nezisekelo zokhuni ukulenza libe lidala kakhulu.
Ukomisa izingcezu ze-orange ukwenza imihlobiso
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi soma kanjani kalula izingcezu ze-orange noma ...
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singasenza kanjani lesi sixha esihle sezimbali, sonke ...
Ama-centerpieces amahle wokuhlobisa ekwindla
Sanibonani nonke! Ukwindla kuyeza futhi ngakho, kungenzeka ukuthi sifuna ukushintsha umhlobiso wendlu nge ...
Ukudweba amakhadibhodi noma ibhodi lomshado njengokhuni
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi lolu hlobo lungaqedwa kanjani kahle ...
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona indlela yokwenza ubuciko obuhlukahlukene ukuhlobisa amakamelo ethu ngomkhathi ...
Umdwebo we-boho wokuhlobisa olula
Sanibonani nonke! Kobuciko banamuhla sizobona ukuthi ungenziwa kanjani lo mdwebo ube ngowangempela ukuze uphelele ...
Imisebenzi yezandla ewusizo yasekhaya, ephelele ukuthatha isikhathi emahoreni ashisayo
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizokhuluma ngendlela yokwenza ubuciko obuhlukahlukene ngaphandle kokujabulisa ...
Imisebenzi yezandla ukujabulela ingadi yethu ehlobo
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizokulethela imibono eminingi yezandla ongazenza ...
Uhlaka lwesicici secici
Le freyimu yamacici esetshenzisiwe kabusha iyindlela enhle yokuba namacici akho anemibala egqamile futhi abonakale endaweni ekhethekile.
Yenza ifenisha yendawo epholile ngendlela elula
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singasenza kanjani isisekelo sefenisha yokwenza ...
Jabulela ingadi yakho nethala lakho ehlobo
Kusukela ekuqaleni kukaJuni kuze kufike ku-Okthoba (kuya ngendawo ngayinye yezwe), yisikhathi sesikhathi esikhulu ...
I-Easy flower pot doll enezimbiza zezimbali
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokunikeza enye inketho yokwenza onodoli abenziwe ngobumba ukuhlobisa ...
Izimbali eziyi-7 zenziwe ngephepha noma igwebu lenjoloba
Sanibonani nonke! Namuhla sikulethela izindlela ezi-7 ezahlukene zokwenza izimbali. Ungathola izinto ezihlukile ezifana nephepha, iphepha ...
I-Easy flower pot doll
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singenza kanjani lo nodoli ngamabhodwe. Iyindlela…
I-5 origami yokwenza ngephepha langasese nokumangala
Sanibonani nonke! Manje njengoba sekufika ukushisa, sifuna ukumema abangani abambalwa ukuthi bazophuza ezindaweni zethu ...
Indlela yotshani yokubhukuda
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singayenza kanjani lendlela enhle yotshani yokufika lapho ...
Qondanisa XNUMX nezilwane
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singayenza kanjani into yokuqala elandelana emithathu sisebenzisa izinto ...
Umbuthano wamatshe wesihlahla
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sikulethela umbono omusha wensimu. Masenze ...
4 imibono yezandla ukunikeza izinto zethu ithuba lesibili
Sanibonani nonke! Namuhla sizokunikeza imibono eminingana ukuze ukwazi ukusebenzisa ezinye izinto esinazo ekhaya futhi ...
Imibono ongayenza engadini yethu lapho ubhekene nesimo sezulu esihle
Sanibonani nonke! Namuhla sikulethela ukuhlanganiswa kwemibono yethu emihle ongayenza engadini yethu futhi uyihlobise ...
Imibono yokuhlobisa ikhaya lethu
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona imibono emihle yokuhlobisa ikhaya lethu. Ezinye ze…
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singawenza kanjani la ma-ladybugs engadini ahlekisayo. Zinhle ...
Umhlobiso wegadi ophakathi nezimbiza
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singawenza kanjani lo mhlobiso ngezimbiza zokubeka ...
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singenziwa kanjani isibuko se-macrame esilula. Lezi zibuko ...
Itafula nezihlalo ezinezingodo zengadi yethu
Sanibonani nonke! Namuhla sikulethela umbono omuhle ngengadi yethu. Ake sibone ukuthi ungayenza kanjani indawo ...
Umqondo wokuhlobisa ikhoneni lengadi
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokukhombisa ukuthi uwenza kanjani lo mbono omuhle wokuwubeka ...
Ukusonga ubhasikidi wengane ngendlela yoqobo
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokunikeza umbono woqobo wokugoqa ubhasikidi wengane ...
Ikhethini elihlotshiswe ngama-pom
Sanibonani nonke! Kumsebenzi wanamuhla sizobona indlela yokuhlobisa ikhethini elihlotshiswe ngama-pom. Ingabe…
Umnikazi wamakhandlela onamagobolondo e-pistachio
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sikulethela indlela yangempela yokusebenzisa amagobolondo e-pistachio….
5 izikebhe ukuhlobisa entwasahlobo
Sanibonani nonke! Namuhla sikulethela imibono emi-5 yobuciko ukuhlobisa ikhaya lethu entwasahlobo. Ziyizinto zobuciko ezilula ...
Uzimele ohlotshiswe ngezintambo noboya
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singahlobisa kanjani ifreyimu ngezintambo noboya. Ikona…
Imisebenzi yezandla enezintambo ezi-6 efanelekile ukuhlobisa
Sanibonani nonke! Namuhla sikulethela imibono eyi-6 yobuciko eyenziwe ngentambo ephelele ukuhlobisa indlu yethu, ...
Lesi sikhonkwane esime ngekati siyindlela yangempela yokuhlobisa noma iyiphi ingxenye yesikhwama noma ukuyiphatha njengesihluthulelo.
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singasenza kanjani lesi sibambi esihle samakhandlela ngamakhokho. Ingabe…
Izinkanyezi ezilengayo ngoKhisimusi
Ngoboya obuncane neglue emhlophe sizokwenza izinkanyezi eziqinile ezizolengwa kunoma yiliphi ikhona lendlu yakho.
Imisebenzi yezandla ezi-4 zokuhlobisa lo Khisimusi
Sanibonani nonke! Ezinye izinsuku ezibaluleke njengoba uKhisimusi esondela, ngakho ...
Ngemininingwane yethu yonke sinendlela elula yokwenza umqhele owenziwe ekhaya noqobo lukaKhisimusi, uzowuthanda umphumela wawo
Imisebenzi yezandla engu-3 yokulungisa kabusha indlu yethu
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizokukhombisa imibono emithathu yokulungisa kabusha indlu yethu. Okwe…
Umhlobiso wabathakathi we-Halloween
Sanibonani nonke! E-Halloween enye yemihlobiso eyinhloko ihlobene nomhlaba we ...
I-Clamps elula kakhulu futhi enhle kakhulu yokuwa
Sanibonani nonke! Manje njengoba sesiqala isikhathi lapho ukukhanya kuqala ukwehla, kuyindlela enhle yokubeka ...
Isikhungo sokuhlobisa ekwindla
Sanibonani nonke! Ngokufika kwamakhaza, ufuna ukushintsha umhlobiso wendlu, ikakhulukazi igumbi lokuphumula, le ...
Ngokushesha futhi kulula kwesihenqo ngocingo
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani i-clamp esheshayo futhi ...
4 yezandla zasekhaya
Sanibonani nonke! Eposini lanamuhla sizokhombisa imisebenzi yezandla engu-4 efanelekile ekhaya lethu. Kukhona okuhlukile ...
Izimbali ezi-5 ezilula ukuzenza ngephepha kanye / noma ngamakhadibhodi
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sikulethela izindlela ezi-5 zokwenza izimbali ngephepha kanye / noma ngamakhadibhodi ...
Ngalobu buciko uzofunda ukuhlobisa lezi zingubo zokugqoka zokuqala zokhuni. Udinga nje upende omncane nobuciko.
Izinhlobo ezi-5 ezihlukene zamakhandlela ekhaya
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singawenza kanjani amakhandlela ahlukene amahlanu ekhaya, ngalinye ...
Uma uthanda ukufunda nokumaka amakhasi akho, ungenza lawa mabhukumaka amise okwe-cactus. Zinesimo esimnandi sezincwadi zakho
Ungayivuselela kanjani ikamelo lokulala elidala
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizobona ukuthi singalivuselela kanjani ikamelo lokulala elidala ukuze silinikeze ...
Indwangu yesikibha yohlobo lwendwangu i-macramé
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza leli khetheni lendwangu yohlobo lwe-macramé. Ilungele ...
Imisebenzi yezandla ngezindophi ukuhlobisa ehlobo
Sanibonani nonke! Ihlobo selifikile futhi nalo, ukushisa. Ngakho-ke namhlanje sizokunikeza ...
Izinyoni ezihlotshisiwe ukuhlobisa amatafula
Lokhu kuwubuciko obulula ongabenza ekhaya ngezinto zokuqala. Kuyizindlwana ...
Indishi yentambo yokuhlobisa
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza lesi sitsha esihle sentambo. Kulula kakhulu ...
Umtshali onekani elidala likadoti
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza lesi sitshalo esihle ngebhasikidi elidala lodoti. Kuhle ...
Izimbali ezinamabhokisi amaqanda
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza ezinye izimbali ngamabhokisi amaqanda. Kungumsebenzi wobuciko ...
Ibhola elihlobisa ngephepha le-china
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza ibhola lokuhlobisa ngephepha le-china. Kuphelele ukuhlobisa ...
Umtshali uhlotshiswe ngezintambo
Sanibonani nonke! Manje njengoba isimo sezulu esihle sesifikile, sekuyisikhathi sokuhlobisa amathala ...
Izincwajana zokuqala ezi-3 zokuhlobisa amashalofu ethu
Sanibonani nonke! Emsebenzini wobuciko wanamuhla sizobona ukuthi singawenza kanjani amabhukhimakhi amathathu oqobo ukuhlobisa amashalofu ethu….
Ibhokisi elimangazayo lokulengisa izithombe
Ungaphuthelwa yileli bhizinisi elihle kakhulu futhi elilula lesimangalo sebhokisi elenga. Udinga kuphela izinto ezimbalwa nesikhathi esincane.
Sanibonani nonke! Kulobu buciko sizokwenza le pompom garland enhle. Kulula kakhulu ukukwenza futhi ...
Ifenisha eyenziwe ngezinduku zodoli
Funda ukuthi ungayenza kanjani ifenisha yangempela eyenziwe ngezinti ze-ayisikhilimu, zizolungela ukudlala nodoli futhi zizojabulisa zonke izingane.
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza ivazi leValentine ngokusebenzisa kabusha imbiza yengilazi, ...
Vintage emise umnyango isiphanyeko
Lo msebenzi wobuciko ungenye indlela yokuhlobisa lelo kona ebelibukeka lingenalutho. Kuyisakhiwo esinesimo esiyindilinga lapho ...
Ibhasikidi ngentambo yejute yokulenga
Enye indlela yokwenza umbono wokuhlobisa uma umbono wakho ukwenza okuthile okwangempela. Singenza obhasikidi ngentambo ye-jute, elula kakhulu futhi esheshayo.
Isibani sezingane esinezinkomishi zepulasitiki
Ngezibuko ezimbalwa ngikwazile ukwenza isibani ngokuthinta okobuntwana. Kuyisiphakamiso esihle kakhulu sephathi yezingane ezincane
I-pomkin pom, enhle futhi elula
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza i-napkin pom elula kakhulu enhle kakhulu ...
Umhlobiso kaKhisimusi wamashalofu
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza umhlobiso kaKhisimusi wamashalofu omuhle kakhulu ...
Phinda usebenzise ibhokisi lezicathulo ngendlela yokuqala
Uma uthanda ukusebenzisa kabusha lapha unendlela yakho yangempela yokwenza, kufanele ube nebhokisi lezicathulo ukuze ukwazi ukwenza ibhokisi
I-Garland ene-mandarin noma ama-orange peelings
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza umqhele ngezinhlamvu ze-mandarin noma ze-orange. Ikona…
Umhlobiso weqhwa leqhwa lomuthi kaKhisimusi
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza umhlobiso weqhwa lesihlahla ...
Indawo ephambili kaKhisimusi
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza isikhungo esihle sikaKhisimusi. Ilungele ...
Hlobisa isipho ngezimbali ezomisiwe
Sanibonani nonke! Kulo msebenzi wobuciko sizokunikeza umbono wokuhlobisa izipho ngezimbali ezomisiwe futhi ...
Ukusonga isipho sikaKhisimusi ngendlela yoqobo
Sanibonani nonke! UKhisimusi uyasondela, yingakho sizokwenza umsebenzi wokusonga ...
Imibono emibili yokuhlobisa ngama-napkins ngezikhathi ezikhethekile
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla, sizokukhombisa imibono emibili yokuhlobisa ngama-napkins ngezikhathi ezithile ...
Umshanelo Witch ukuhlobisa nge-Halloween
Sanibonani nonke! Sikulethela omunye umsebenzi wokuhlobisa nge-Halloween nangezinto zemvelo: umshanelo womthakathi. Uyafuna ...
Umnikazi wamakhandlela we-Halloween osesimweni somama
Sanibonani nonke! Kulo msebenzi wobuciko sizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani ikhandlela elilula kakhulu le-Halloween. Uyafuna ukubona…
Sanibonani nonke! IHalloween iyasondela ngaleso sizathu, kulo msebenzi sikulethela indlela yokwenza ilulwane ...
Senza isikhungo sekwindla
Sawubona! Kubuciko banamuhla sizokwenza indawo yasekwindla ukuhlobisa igumbi lethu lokuphumula noma okunye ...
Ihlanganisa amamitha kagesi
Eminyango yezindlu imvamisa kukhona amamitha kagesi amancane wobuhle. Sizokwenza ikhava yemitha elula ukuyixazulula
I-Origami yephepha lephepha langasese
Kubuciko banamuhla sizokwenza izinhlobo ezintathu ze-origami zeroli yangasese. Amafomu…
Funda ukuthi ungawenza kanjani umbambi wamaphupho
Isifundo esimnandi ngempela sokuthi ufunde ukuthi ungenza kanjani umzingeli wamaphupho. Kwenziwe ngezinto ezibonakalayo kanye nobuciko obulula bokwenza nezingane.
Ikhandlela le-Rustic orange, elihle futhi elinephunga elimnandi kakhulu
Kwebuciko banamuhla sizokwenza ikhandlela elihle eli-orange lokuhlobisa amakamelo ethu, jabulela i ...
Ikhandlela lemvelo likalamula, liyashesha futhi linuka kamnandi
Kwebuciko banamuhla sizokwenza ikhandlela lemvelo lemonti, elihlobisa kakhulu, lilungele izinto eziphambili ...
Umqondo wokwenza izinombolo zokuzalwa zamakhekhe
Ukhathele izinombolo ezijwayelekile zamakhandlela zamaqebelengwane? Sikunikeza umbono wokwenza izinombolo zokuzalwa, ze ...
Sakha idilozi lezimbobo zefenisha yethu
Kulo msebenzi wobuciko sizokwenzela idilowa lezimbobo zefenisha noma amashalofu. Kuhle kakhulu, kuhle kakhulu ...
UThingo lwenkosazana ukuhlobisa igumbi lokulala lezingane
Lo msebenzi wobuciko kulula kakhulu ukwenza ifu le-rainbow izingane ezizolithanda. Udinga isikhathi esincane kakhulu nezinto ezimbalwa.
Imibono emithathu yokuhlobisa ngamaposikhadi wokuhamba
Uyawathanda amaposikhadi, uyawathenga kodwa-ke awazi ngempela ukuthi agcina kuphi futhi agcina ediloweni? Sikunikeza ezintathu ...
Ukugoqwa kwamakhethini ngentambo nokuxubha amazinyo
Kubuciko banamuhla sizokwenza isibopho samakhethini ngentambo ne-Chinese toothpick yokudla, ...
Senza i-vase ngokusebenzisa kabusha ibhodlela lengilazi
Ngesimo sezulu esihle sifuna ukuhlobisa kabusha, ngalokhu sizokwenza i-vase ngokusebenzisa kabusha ibhodlela lengilazi. Iphelele yodwa noma njengembali yezimbali
Senza amalambu amabili okuhlobisa ngamabhodlela engilazi kanye nezibani eziholelekile
Senza amalambu amabili okuhlobisa ngamabhodlela engilazi kanye nezibani eziholelekile, kulula kakhulu futhi kungokoqobo, ngaphezu kokwenza noma yiliphi igumbi lamukeleke ngokwengeziwe.
Sakha indawo yezimbali embizeni yezimbali ephukile
Unayo imbiza yezimbali ephukile? Ungayilahli, singenza izimbiza zoqobo ngayo, njengale ndawo esembizeni yezimbali ephukile.
I-terrarium enempilo yangempela ebukeka kahle
Izitshalo zikhanyisa amakamelo, kepha kwesinye isikhathi asinayo indawo efanelekayo yesitshalo esiphilayo. Ngabe senza i-terrarium enamanzi ebukeka ingokoqobo?
Ibhokisi elenziwe ngezinti ze-ayisikhilimu zokuhlobisa
Ubuciko bokwenza ibhokisi elincane lamapulangwe elenziwe ngezinti ze-ayisikhilimu. Ilungele izinto zokuphinda zisebenze, nanjengento yokuhlobisa.
3 imibono ukuhlobisa ingane yakho eshaweni ngezindlovu
I-baby shower yiphathi lapho ukufika kwengane kunoma yiliphi ikhaya kugujwa. Kulokhu okuthunyelwe ...
Ungayiguqula kanjani ithangi lenhlanzi libe yinto yokuhlobisa
Umqondo wokuguqula ithangi lezinhlanzi elincane kakhulu libe yinto yokuhlobisa, sisebenzise izinto esinazo ekhaya.
Ungayenza kanjani imihlobiso elengayo ngezinduku ze-ayisikhilimu
Incazelo yendlela yokwenza amafreyimu wokuhlobisa ngezinduku ze-ayisikhilimu, ukuphinda usebenzise kabusha nokupenda amakhadibhodi, bese uwalengisa usebenzisa intambo ewugqinsi. Ubuciko obulula!
I-centerpiece enezimbali, amatshe nekhandlela
Kulo msebenzi wobuciko, sizokwenzela indlu yethu indawo yokugqoka lapho isimo sezulu sihle. Iya…
Itreyi lensipho elisebenzisa kabusha amathini epulasitiki
Emkhakheni wokuhambisa insipho, sisebenzise umshini wokuhambisa, namuhla sizosebenzisa ibhodlela lepulasitiki ukwenza ...
Imbali elula ye-crepe paper lotus
Sizokwenza imbali ye-lotus ngephepha le-crepe, elifanele ukuhlobisa indlu. Ingagqokwa yodwa, uku ...
Isepha sokuhambisa kabusha ibhodlela lengilazi kanye nepulasitiki
Sizokwenza umsebenzi wobuciko uphinde uvuselele izinto esinazo ekhaya futhi sizokwenza i-dispenser ...
Izimbali zeCherry, zilungele ukuhlobisa indlu esimweni sezulu esihle
Kulezi zinsuku zesimo sezulu esihle kubukeka sengathi ufuna ukushintsha kancane umhlobiso wendlu ngokuthola okuthile entwasahlobo….
Izincwadi zokubhuka zamaRock, ezisheshayo ukwenza
Kulobu buciko sizokwenzela ukubhuka ngencwadi ngamatshe. Uzobona ukuthi kuwubuciko obulula kakhulu nokuthi ...
Ama-rose abicah ashisayo namatshe abomvu
Sizokwenza i-rose nge-silicone eshisayo, ephelele ukuhlobisa ukuphela kwamapeni ethu noma amapensela. Bangakwazi futhi…
Umdwebo wesihlahla somhlobiso egatsheni
Incazelo nenqubo yokwenza umuthi wokuhlobisa kusuka egatsheni. Umsebenzi wobuciko ongeke ushiye noma ngubani ongenandaba!
Kulo msebenzi wobuciko sizokwenza uphaphe ukuhlobisa, ngenqubo ye-macramé. Leli peni lilungele ...
Senza isibambi samaphupho esilula esimise izinkanyezi.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokwenza abadobi bamaphupho, kulo msebenzi sizokwenza isibambi sephupho esilula, lapho inetha ...
Ungenza kanjani isibuko sokuhlobisa ngokumisa amaqabunga aluhlaza
Sichaza ukuthi singenziwa kanjani isibuko sokuhlobisa ngokuthatha amaqabunga aluhlaza ezitshalo siphinde sizomise ukuze zigcine umbala wazo.
3 IMIBONO yokwenza izimbali ze-CRAFTS yakho
Izimbali ziyinto ebalulekile emisebenzini eminingi yobuciko. Kulokhu okuthunyelwe ngizokukhombisa IZimbali ezingu-3 ...
Ungayenza kanjani intambo
Ungasithola kanjani isithombe semicu, esaziwa njengentambo, futhi ungafi uzama. Incazelo mayelana nenhlanganisela, amathuba nokucaciswa.
Sakha amakhandlela aphephile futhi afudumele ekhaya
Uyakuthanda ukukhanya kuma kwamakhandlela? Ungathanda enye indlela yokuthi ukhanyise amakhandlela nokuthi ...
Imisebenzi yezandla engu-3 yosuku luka-Valentine enezimbiza zengilazi
Kuncane kakhulu okusele koSuku Lwezithandani noma uSuku Lwezithandani. Igujwa ngoFebhuwari 14 futhi njalo ...
Ungayenza kanjani i-decoupage ngaphandle kwemibimbi usebenzisa i-iron.
I-Decoupage inqubo equkethe ukwenza imiklamo ngama-napkins alandelwa ngeglue. Kwesinye isikhathi ntambama kuyanzima futhi bayaphuma.Funda ukwenza inqubo yokuhlanza ngaphandle kwepuleti, ilungele noma iyiphi indawo futhi ihlala ingenayo imibimbi, umphumela muhle.
Uzenza kanjani izithombe ngokubhala nokubhala ngemibhalo
Ngizokukhombisa ukuthi ungazenza kanjani izithombe ngokubhala nokubhala ngemibhalo, uzobona ukuthi kuyindlela elula futhi cishe ...
Imisebenzi yezandla kaKhisimusi yokuvuselela amabhokisi amakhadibhodi.
Ekuthumeni kwanamuhla sizofunda ukuthi singawavuselela kanjani amabhokisi amakhadibhodi ukwenza ozimele bezithombe ezi-2 zikaKhisimusi. Kuhle ukubeka izinkumbulo zakho. Funda ukusebenzisa kabusha amabhokisi amakhadibhodi ukwenza ubuciko bukaKhisimusi njengalezi ozimele zangempela zokuhlobisa ikhaya lakho.
Amabhola ukuhlobisa isihlahla sakho sikaKhisimusi kulula kakhulu
Amabhola kaKhisimusi angumhlobiso osetshenziswa kakhulu ukuhlobisa umuthi wethu ngalezi zinsuku, kepha kwesinye isikhathi ubiza kakhulu. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungenza kanjani ukuthi ufunde ukuthi ungenza kanjani la mabhola kaKhisimusi ukuhlobisa isihlahla sakho. Ziphelele futhi zishibhile ukwenza imibala eminingi ehlukahlukene.
Ungawasebenzisa kanjani kabusha ama-CD kaKhisimusi. Elf Santa Claus.
Kokuthunyelwe kwanamuhla ngikulethela umqondo omusha lapho ungafunda khona ukwenza kabusha ama-cd noma ama-disc onawo ekhaya futhi angasebenzi ngoba afunda ukusebenzisa kabusha i-cd noma i-dvd nokwakha le elf noma i-elf yeSanta Claus yokuhlobisa UKhisimusi futhi unikeze ukuthinta okuhle kwasekuqaleni.
Ungasisebenzisa kanjani kabusha isiphanyeko ukuhlobisa igumbi lengane
Igumbi lengane yindawo okumele ibe yinhle futhi ikhululeke ukwamukela usana olusanda kuzalwa. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungenza kanjani i-Funda ukwenza le phosta enegama lengane ukuhlobisa igumbi lengane yakho ngokuvuselela kabusha iziphanyeko zezingubo.
Izimbali zamaphepha zingenye yemisebenzi yezandla esetshenziswa kakhulu kuwo wonke amaphrojekthi afana nokuhlobisa iphathi, izinsuku zokuzalwa, intwasahlobo, njll. ukuthinta kwasekuqaleni.
Ama-Clown abalingiswa abavela emicimbini eminingi. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungayenza kanjani le injoloba ye-eva ephelele ukuze unikeze ukuthinta kwasekuqaleni kokuthi Funda ukwenza le clown yenjoloba ye-eva ukuhlobisa noma iyiphi ingxenye yephathi yakho noma izipho zezinsuku zokuzalwa zezingane, zibukeka zizinhle.
Ukusetshenziswa kabusha kwamathini e-aluminium. I-Decoupage yabaqalayo
Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungawasebenzisa kanjani kabusha amakani e-aluminium bese uwaguqula abe yilesi sitayela se-shabby chic. Ungawasebenzisela ipensela. Funda ukusebenzisa kabusha amathini e-aluminium ngenqubo ye-decoupage ngezinyathelo ezimbalwa nangokonga kakhulu ngalesi sifundo sinyathelo nesinyathelo.
INDLELA YOKWENZA IZIMBANGELA ZOMUZWA WOKUHOLISA ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayakha kanjani i-cactus ezwayo. Lezi zitshalo ziyimfashini kakhulu futhi zihlobisa kakhulu, kepha kwesinye isikhathi kungenxa yezizathu ezithile. Kulesi sifundo ngikufundisa ukuthi ungakha kanjani i-cactus ezwayo. Sizofunda ukuzidala ngokwethu ngendlela yokufakelwa kepha ehlobisa ngokulinganayo.
INDLELA YOKWENZA IBHODI LODONGA NEZITIKHI ZE-ICE CREAM - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungakha kanjani ipulaki lodonga elihle usebenzisa izinti ze-popsicle noma izinduku ezakhiwe ngokhuni. Kulula kakhulu futhi kulula kakhulu Kulesi sifundo ngikufundisa ukuthi ungakha kanjani i-wall planter enhle usebenzisa izinduku ze-ayisikhilimu noma izinti zokhuni oluyisicaba. Kulula kakhulu futhi kuhlobisa kakhulu.
Hlobisa ikamelo lakho ngale pennant yenjoloba ye-eva kanye namaphampu
Amaphenathi asetshenziswa kakhulu ukuhlobisa amakamelo namaphathi ezingane. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungayenza kanjani le pennant ngembalwa kakhulu. Funda ukuthi ungayenza kanjani le pennant ephelele ukuhlobisa igumbi lakho noma yiliphi ikona lendlu yakho ngezinto ezimbalwa kakhulu, nakanjani uzokuthanda.
Ukuboniswa kwe-DIY ngezibuko zakho ngezinduku zokhuni ngemizuzu emi-5
Ukuboniswa kobucwebe nezesekeli kungenye yezinto ezihlobisa kakhulu ezikhona emakamelweni azo zonke izindlu. Kulokhu okuthunyelwe ngizofunda ukuthi ngingawenza kanjani lo mbukiso ngezinduku zokhuni ukuhlobisa igumbi lakho ngemizuzu embalwa bese ubeka izingilazi noma ubucwebe bakho.
Uhlaka lwesithombe ehlobo. Kuhle kakhulu ezinganeni
Funda ukuthi ungalwenza kanjani lolu hlaka lwezithombe zasehlobo ngezinto ezenziwe kabusha, ubuciko obufanele bezingane kula maholide.
3 IMIBONO ELULA YOKUVUSELELA AMANQAKU AMAKHANZI - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulesi sifundo ngikulethela imibono emi-3 yokuphinda usebenzise amathini wethini bese uwaguqula abe yizinto ezinhle zokuhlobisa ikhaya lakho. Ibhokisi lezicubu, isibani samakhandlela nevazi elengayo ozonikeza ngalo impilo yesibili kulezo zinto ezazizolahlwa.
Iziqukathi zepulasitiki ze-Decoupage
Funda ukuthi ungawasebenzisa kanjani kabusha amakani epulasitiki bese uwaguqula abe amabhodwe we-decoupage ukuhlobisa noma iyiphi ikhona lendlu yakho bese uyinika ukuthinta kwasekuqaleni.
Mbumbulu ukhuni uphawu ukuhlobisa ikamelo lakho
Funda ukuthi ungayenza kanjani le phosta, ilungele ukuhlobisa umnyango wekamelo lakho bese uyinika ukuthinta kwentwasahlobo, efanelekile kulezi zinsuku.
Ungayiguqula kanjani impumputhe entsha ibe ngeyomuntu futhi ehlukile.
Sizobona ukuthi ungayiguqula kanjani impumputhe elula ibe yinto ekhethekile nehlukile, ukuyishintsha ngokuya ngezidingo zakho, neminye imibono engakusiza.
Ungenza kanjani ibhokisi lembali lephepha ukuhlobisa igumbi lakho
Funda ukuthi ungalenza kanjani leli bhokisi lokuhlobisa ngezimbali zamaphepha zilungele noma iliphi ikona lendlu yakho noma iphrojekthi ye-scrapbooking
IMIBONO EMI-3 ELULA NE-SILICONE EMGUNYENI NOMA E-FUSE FUSE GLUE
Kulesi sifundo ngikulethela imibono emi-3 yokwenza nge-hot melt glue noma eyaziwa nangokuthi isibhamu se-silicone noma i-hot silicone eshisayo. Kuyithuluzi elibalulekile kunoma iliphi ikona lobuciko ngakho-ke iningi lenu linalo.
Ungazenza Kanjani Izimbiza Ngezinti Zokuguga Ezikhulile
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungadala kanjani amabhodwe akho usebenzisa okokuxubha noma owaziwa nangokuthi ama-toothpick. Yize iyigugu elincane kakhulu lezinto ezibonakalayo, njengoba lenziwe ngokhuni singakha izinto ezinhle kakhulu futhi sizinikeze ukuthintana okuphelelisayo ngokuqeda esikufunayo.
Funda ukuthi ungenza kanjani ama-polka dot vases.
yenza ama-polka dot vases, alula futhi asebenziseke kalula ekhaya noma nabangani, ukuphana noma ukuhlobisa noma yiliphi ikhona lethu.
Isikhungo sephathi sezingane
Ungenza kanjani isikhungo setafula lezingane ngamabhaluni namabhontshisi wejeli. Izingane zizojabula ngalesi sikhungo.
ake sibone ukuthi ungenza kanjani umnikazi wamakhandlela asebenzise kabusha ikani le-tuna. Kulula kakhulu ukukwenza futhi ngendlela elula futhi eyonga.
Ungayenza kanjani ithileyi elimise okwamaqabunga, uzomangala ukuthi kulula kanjani.
Ake sibone ukuthi ungenza kanjani ithileyi elimise okwamaqabunga. Ingasetshenziselwa ukuyisebenzisa ngendlela othanda ngayo kakhulu, iyasebenza futhi iyahlobisa.
Isikhwama se-Unicorn sokuhlobisa amaphathi ngoswidi
Funda ukuthi ungasenza kanjani lesi sikhwama se-unicorn esiphelele noma imvilophu yokuhlobisa amaqembu akho bese uwagcwalisa ngoswidi noma ikhadi lokubingelela
Imibono emi-4 yokuhlobisa kusetshenziswa okokugqoka okokugqoka
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungabakha kanjani ubuciko obuhlukahlukene obungu-4 usebenzisa izikhonkwane zokugqoka. Thola ukuthi zibukeka kahle kanjani ngento elula nansuku zonke.
Izinhlamvu zekhadibhodi ukuhlobisa igumbi lakho noma ideski
Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zinhlamvu zamakhadibhodi zilungele ukuhlobisa ikamelo lakho noma yiliphi ikhoneni lendlu yakho bese ulithinta ngokukhethekile.
Amanzi enjoloba ka-Eva kulula kakhulu ukuhlobisa ikhaya lakho
Funda ukuthi ungawenza kanjani lo mlilo wamanzi wenjoloba we-eva ngendlela elula, esheshayo nangomphumela omuhle, olungele ukuhlobisa ikhaya lakho.
Isiphanyeko somnyango wenjoloba wezingane ngefu likawaii
Funda ukuthi ungayenza kanjani le hanger emnyango wengane yakho. Yenziwe ngenjoloba ye-eva futhi kulula kakhulu futhi ibukeka ingeyoqobo.
Ungayenza kanjani ibhodi yokuzenzela odongeni
Ake sibone ukuthi ungenza kanjani ibhodi elenziwe ngokwalo odongeni. Kulokhu kuyibhodi elimise okwenkundla yebhola.
Kulesi sifundo ngikulethela imibono emi-5 elula futhi engabizi kakhulu yokwenza izinto zokuhlobisa nezisebenzisekayo ngezinti ze-ayisikhilimu ongazenzela zona.
Ungayenza kanjani umnikazi wefoni ephathekayo esesimweni sekhukhi kawaii - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungasakha kanjani isiphathi sefoni ephathekayo esime ngekhukhi kawaii. Uphumuza umakhalekhukhwini wakho ngenkathi uhlobisa ngekhukhi enkulu ye-kawaii.
Ungazihlobisa kanjani izibuko ngomphumela wemabula - I-DIY ilula futhi iyashesha
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungazihlobisa kanjani izingilazi ngomphumela omangazekile, yize ungasebenzisa le ndlela kunoma iyiphi ingilazi noma into yobumba.
UMargarita owenziwe ngezigqoko zepulasitiki ukuze anikeze
Funda ukuthi ungayenza kanjani le margarita ngokusebenzisa kabusha amakepisi epulasitiki ukuhlobisa ikhona lendlu yakho futhi uwenze ubukeke umuhle kakhulu futhi unobungane.
Irabha nenyoni yephepha ukuhlobisa igumbi lezingane
Funda ukuthi ungayenza kanjani le nyoni encane yephepha ne-eva yerabha ukuhlobisa igumbi lezingane, okuhle ukukwenza nezingane kwezobuciko.
Umhlobiso wokulenga wenjoloba we-EVA wezipho Zosuku Lwezithandani
Funda ukuthi ungawenza kanjani lo mhlobiso ulenga ukuhlobisa ikhaya lakho ngoSuku Lwezithandani noma ukuze unikeze njengemininingwane yangempela ngalolu suku.
Ibhokisi elihlobisayo lokunikeza ngoSuku lwe-Valentine kulula kakhulu
Funda ukuthi ungawenza kanjani lo mdwebo wokuqala ukuze unikeze ngosuku lothando nobungane noma usuku luka-Valentine futhi umangaze umuntu okhethekile
Ungayenza kanjani i-matryoshka noma i-eva doll yaseRussia
Funda ukuthi ungawenza kanjani udokotela wase-matryoshka noma waseRussia ngenjoloba ye-eva ngezinyathelo ezimbalwa kakhulu futhi umphumela wayo ungowokuqala, kuhle ukuhlobisa.
Imbali kaKhisimusi enamaphepha asendlini yangasese ukuhlobisa
Funda ukuthi ungayenza kanjani le mbali kaKhisimusi ukuhlobisa umnyango wakho noma yiliphi ikhoneni lendlu yakho ngokuvuselela imiqulu yephepha lenhlanzeko.
Umqhele kaKhisimusi wokuhlobisa isihlahla ngokuvuselela amakhadibhodi
Funda ukuthi ungenza kanjani ukuthi amakhadibhodi kaKhisimusi asetshenziswe kabusha ukuze uhlobise isihlahla sakho sikaKhisimusi futhi uwenze owokuqala kakhulu kulawa maholide.
Indlela yokwenza intambo yokuhlobisa namagobolondo isihlahla sikaKhisimusi
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungasakha kanjani isihlahla sikaKhisimusi esihlobisa ngentambo namagobolondo. Kulula ukukwenza futhi kungokoqobo ngoKhisimusi.
Uyenza kanjani imihlobiso kanokusho kaKhisimusi
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani imihlobiso kaKhisimusi enhle, ngesitayela seNordic esisesimfashini futhi esithambile kakhulu esithinta igolide kulezi zinsuku.
Indlela Yokwenza Izihlahla Zezintambo Nobhontshisi Omnyama ngoKhisimusi
Kulesi sifundo ngizokukhombisa ukuthi ungazakha kanjani izihlahla zezintambo zokuhlobisa nobhontshisi omnyama ngoKhisimusi. Zizobukeka kahle etafuleni noma eshalofini.
Indlu encane yama-gnomes, imikhovu noma ama-fairies
Yakha le ndlu encane ngama-gnomes, ama-elves noma ama-fairies ukugcwalisa igumbi lezingane ngenganekwane futhi uhlobise izindaba zabo
Kulula kakhulu ukusebenzisa kabusha ikhandlela elinamathini kanye neyogathi
Funda ukuthi ungenza kanjani labanikazi bamakhandlela baphinde basebenzise amathini nama yogurts. Umbono osebenzayo, oshibhile nomphumela umnandi kunoma yiliphi ikhona lendlu yakho
Felt izimbali ukuhlobisa ubuciko bakho be-DIY
Funda ukuthi ungenza kanjani lezi zimbali ezizwakala zilungele ukuhlobisa noma yimuphi umsebenzi wobuciko onawo engqondweni, kuhle.
Ama-coasters anamehlo egazi ukuhlobisa i-Halloween
Funda ukuthi ungenza kanjani ama-coasters we-Halloween anamehlo agazi, alungele ukuhlobisa itafula lakho ephathini elinyantisayo.
Amakhadibhodi alula kakhulu namagundane erabha eva
Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zigundane ngenjoloba ye-eva namakhadibhodi ukuhlobisa igumbi elincane kunawo wonke endlu, zingezangempela.
Uyenza kanjani imbali yocingo ukuhlobisa izimbiza
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayakha kanjani imbali yocingo ukuhlobisa amabhodwe futhi ubanikeze ukuthinta okumnandi nokwangempela. Hlanganisa imibala bese udala izinkulungwane zezimbali.
Dala i-vase ngokuvuselela amabhodlela engilazi
Kulesi sifundo ngikukhombisa umbono wokwakha i-vase ngokuvuselela amabhodlela engilazi. Sizolayini ibhodlela bese sisebenzisa i-decoupage.
Umnikazi wamanothi. Imisebenzi yezandla elula kakhulu
Ngalesi sibambi senothi esenziwe ngokhuni nangenjoloba ye-eva awusoze wazikhohlwa izinto okufanele uzenze. Kubukeka kukuhle ukuhlobisa isiqandisi sakho
Ungenza kanjani amakhandlela ahlotshiswe ngama-napkins
Uma uthanda ukuhlobisa ikhaya lakho ngamakhandlela, bona ukuthi kulula kanjani ukuhlobisa ikhandlela bese ulishiya lingelona elangempela, ukuhlobisa ngamanabukeni
Ungayihlobisa kanjani incwajana nge-Hama Beads (kufakwe nephethini)
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayihlobisa kanjani incwadi yokubhalela nge-Hama Beads ezoyinika impilo nenjabulo. Lungela ukubuyela esikoleni futhi wakhe izincwadi zokubhala zokuqala.
Ithebula elinezinhlamvu zendwangu - inqubo ye-Decoupage
Uma ufuna ukuhlobisa igumbi lakho ngendlela yoqobo, ungaphuthelwa igxathu negxathu lokwenza umdwebo ngezinhlamvu zendwangu, usebenzisa inqubo ye-decoupage.
Uyenza kanjani i-garland yezithelo
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-garland yezithelo ezokhanyisa noma iliphi ikona, kepha futhi ilungele amaqembu nokuhlobisa amawindi.
Ungazenza kanjani izitsha zokuhlobisa ngobumba lwe-polymer
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi uzakha kanjani izitsha zobumba ze-polymer zokuhlobisa ngendlela elula kakhulu. Kuhle ukushiya okhiye, ubucwebe, imali ...
Ungayifaka kanjani kabusha ifenisha
Vuselela ikhaya lakho ngalesi sifundo sendlela yokuvuselela ifenisha. Umsebenzi olula futhi ongabizi kakhulu ongawenza.
Obhasikidi abanezinkomishi zepulasitiki ezilula kakhulu
Funda ukuthi ungenza kanjani la obhasikidi ngezinkomishi zepulasitiki nganoma yisiphi isenzakalo esikhethekile noma iphathi yezingane. Umphumela ungowasekuqaleni kakhulu.
Ungawenza kanjani ama-pom poms
Kulobu buciko sizobona ukuthi singenza kanjani amapompo ukuhlobisa iphathi, itafula lesiginesha noma itafula elimnandi.
Ozibuthe abaqhephukile ehlobo
Funda ukuthi ungayihlobisa kanjani ifriji yakho ngalezi zimagnethi zasehlobo ezime ngo-ayisikhilimu. Kulula kakhulu futhi umphumela njengoba ubona muhle!
Ungasenza kanjani isithombe sokuhlobisa segumbi lezingane
Uma uhlobisa igumbi lomntanakho, bheka isinyathelo ngesinyathelo ukwenza isithombe sokuhlobisa segumbi lomntwana
Indlela yokwenza umnenke ukuhlobisa amabhodwe
Kulesi sifundo ngikukhombisa igxathu negxathu ukwakha umnenke omnandi wokuhlobisa amabhodwe. Benze ngemibala eminingi, kuzonikeza impilo ezitshalweni zakho.
Amakhekhe ngobuciko obulula kakhulu bezingane
Ama-muffin noma amakhekhe angama-dessert eminyakeni yamuva anikeze okuningi ukukhuluma ngakho. Singakwazi…
Indlela yokwenza isixha sezimbali nge-lace
Uma ufuna ubuciko obubucayi bokuhlobisa ikhaya lakho noma usuku lwakho lokuzalwa, funda ukuthi ungenza kanjani isixha sezimbali ngentambo.
Kulokhu okuthunyelwe ngikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani le potpot enemibala enothingo noma i-flowerpot ilungele ukuhlobisa noma iyiphi ikhona lendlu yakho bese uyinika ukuthinta okuhle kwasekuqaleni
Ungabenza kanjani abaphathi bamakhandlela wesigaxa se-styrofoam
Kulesi sifundo uzofunda ukuthi ungabakha kanjani abaphathi bamakhandlela abanezigaxa ze-styrofoam, ezilungele ukubeka ikakhulukazi amakhandlela amade nokuhlobisa noma yiliphi ikona.
3 imibono yokwenza amabhola okuhlobisa
Kulesi sifundo ngikunikeza imibono emithathu ngesinyathelo ngesinyathelo nevidiyo ukudala amabhola okuhlobisa ngezitayela namasu ahlukile. Khetha okukufanele kakhulu.
Umdwebo wevemvane wezingane
Funda ukuthi ungayihlobisa kanjani inkulisa yentombazane ngepuleti lepulasitiki elilula. Umphumela uzokumangaza.
Amacimbi aneziqeshana nama-pom
Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zibungu ezinhle ngama-pom pom nezikhonkwane zokugqoka. Umphumela uzoba muhle. Ungalokotha ??
Funda ukuthi ungenza kanjani lo mhlobiso omise ibhola entwasahlobo. Kuhle ukuhlobisa igumbi lakho, awukwazi ukuphuthelwa igxathu negxathu!
Ungenza kanjani umqhele wembali ngesikhunta sekhekhe
Kulesi sifundo ungabona igxathu negxathu ukwakha umqhele wezimbali onobumba bamakhekhe. Ilungele ukuhlobisa noma yiliphi igumbi entwasahlobo.
Umhlobiso wesipho sembali.
Funda ukuthi ungenza kanjani lo mhlobiso omuhle ukuhlobisa izipho zakho. Kulula kakhulu futhi yinhle.
Amalebula we-Scrapbooking noma amathegi
Funda ukuthi ungenza kanjani lawa amalebula noma amathegi wokubhuka abe lula kakhulu. Ziyamangalisa !!!
Uzenza kanjani izinhliziyo ngokusebenzisa kabusha ijean
Ungayisebenzisa kanjani kabusha i-jean yakho futhi wenze izinhliziyo zokuhlobisa kalula futhi ngokushesha.
Isitsha sezimbali sothando
Kokufundisa kwanamuhla sizobona ukuthi singayenza kanjani isitsha sothando ngokusebenzisa kabusha imbiza yengilazi. Nge,…
Amakhandlela okuhlobisa anezimabula
Funda ukuthi ungenza kanjani la makhandlela okuhlobisa ngezinto ezimbalwa. Zilula kakhulu futhi zingezokuqala.
Umhlobiso womnyango wekamelo lokulala lezingane
Wenza kanjani umhlobiso womnyango wekamelo lokulala lengane, usebenzisa amakhadibhodi namakhadibhodi anemibala.
Uhlaka lwesithombe samakhadibhodi we-Retro
Funda ukuthi ungayenza kanjani le freyimu yesithombe se-retro ezogcwalisa ikhaya lakho ngokuthinta kwangempela.
Shintsha ingilazi ibe yisiphathi sekhandlela nge-washi-tape
Ngonyaka noma eminyakeni embalwa eyedlule, angikhumbuli kahle, amateyipu ama-washi aba semfashinini kakhulu. Kepha,…
IGarland yonxantathu eyenziwe ngezingubo ezinoboya
Indatshana ka-DIY yokuthi ungayenza kanjani i-garland ngezingubo ezinoboya.
phinda ubeke isitulo njengendawo yokulala ebusuku
Okokufundisa ukusebenzisa kabusha indle njengetafula eliseceleni ngokungeza uhlobo lwebhasikidi elenziwe ngendwangu.
Hlobisa ibhokisi lezithelo.
Kulo msebenzi wobuciko sikukhombisa ukuthi, ukuqala ebhokisini lama-strawberry, singakushintsha kanjani ukubukeka kwawo kube ngumhlobiso.
Garland ngezinhliziyo zenjoloba ye-EVA
I-athikili ye-DIY yokuthi ungayenza kanjani i-garland yezinhliziyo ezenziwe nge-EVA rubber. Ilungele umhlobiso wasehlobo omkhulu kanye namaphathi ashisayo.
Izimbali zasehlobo zamabhaluni kanye nentambo yesikibha
Isifundo sendlela yokwenza umqhele wezimbali ngamabhaluni nendwangu. Kuyisifundo esihle sokuhlobisa iphathi.
Phinda usebenzise izimbiza zengilazi zehlobo
Isifundo se-DIY sokwenza ehlobo. Ilungele ukuhlobisa emaphathini echibini nasezinyweni. Ngezinye izimbiza zengilazi sizokwakha izibani ezinkulu zamakhandlela.
Ibhodlela lengilazi lipendwe ngama-watercolor
Isifundo sokuphinda usebenzise ibhodlela uphinde ulihlobise ngopende be-watercolor esizolungisa nge-varnish yengilazi.
Iphepha leCrepe nentambo yomqhele wentambo
I-athikili ye-DIY ekhombisa ukuthi ungenza kanjani umqhele we-DIY ngokuphelele futhi uphelele ukugqoka lesi sikhathi sonyaka sasehlobo.
Inhliziyo ye-DIY Garland
I-athikili yokuhlobisa amaqembu asentwasahlobo. Isifundo sokwenza umqhele wezinwele ngezinhliziyo ezenziwe nge-eva rubber.
Izimbali zocingo kanye ne-nail polish
DIY indlela yokwenza izimbali ngocingo lwe-aluminium kanye ne-nail polish Kulula futhi kuhle, zilungele ukuhlobisa noma njengezesekeli zezinwele. Uzobathanda!
Ungayenza kanjani i-rose nge-FIMO
I-athikili ka-DIY yokuqalisa ubumba lwe-polymer, kulokhu okuthunyelwe, sizobona ukuthi singayenza kanjani i-rose ngendlela elula futhi lokho kunikeza imiphumela emihle kakhulu.
IGarland yamaqembu anephepha le-crepe
Into ekahle ye-DIY yamaphathi. Kulesi sifundo, sizofunda ukuthi singayenza kanjani i-garland ngephepha le-crepe kalula futhi ngokushesha. Ilungele amaqembu omzuzu wokugcina.
Okhiye ngokwezifiso, ngezinto ezahlukene
Okhiye ngokwezifiso sekuyibo bonke ukufutheka, futhi kulula ukukwenza. Kunamasu amaningi nezinto zokwakha esingazisebenzisa ukuhlobisa okhiye bethu.
Indwangu yetafula enobuhlalu
Indwangu yetafula yohlobo lomgijimi wethebula, ehlotshiswe ngobuhlalu (irockery enemibala ehlukene) nentambo ewukotini ejiyile, ekhiqiza ukwakheka kwezimbali okuyisisekelo.
Iziqeshana ezihlotshiswe ngeminsalo nama-pom pom
Iziqeshana ezihlotshisiwe ubuciko obuhle ukwenza ngezifiso iziqeshana zakho futhi uzinikeze ukuthinta okuhlukile. Dala iziqeshana zakho ezihlotshisiwe futhi uzenze zihluke futhi zihluke.
Umhleli wemigexo nezikhwama ezinezilengiso
Isifundo sendlela yokuhlela izesekeli bese uzibeka kahle kuma-hanger Le DIY izokusiza ukuthi uzihlelele ukuze uhlale unakho okufunayo.
Izimbali ezimibalabala ezenziwe ngezinkinobho ezihlekisayo
Umgexo wokuhlobisa onezinkinobho zokuhlobisa noma yiliphi igumbi noma wokunikeza njengemininingwane yoqobo nokwenza lula. Ngezinto ezilula nezinhle.
Pyrography ibhokisi elinomdwebo owufunayo
Isifundo sendlela yokuthwebula isithombe esiyisicaba nge-pyrograph ebhokisini ukuhlobisa noma ukugcina izinto.
I-Garland yezimbali nezibani
I-athikili ka-DIY yokuthi ungayenza kanjani i-garland yezimbali eyenziwe ngephepha le-crepe. Kule DIY, sizosebenzisa umqhele wamalambu kaKhisimusi, izimbali neteyipu.
Indwangu edwetshwe ngesandla yokuhlobisa leyo ndawo ekhethekile
Indwangu enhle ependwe ngesandla eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele ukuhlobisa noma iyiphi ikhona. Ukubamba i-Super Hero eyintandokazi yabancane bethu
Ungenza kanjani ibhokisi elihlotshisiwe lokhuni
Ngamasu ehlukene sizobona ukuthi singenza kanjani ibhokisi elihlotshisiwe lokhuni. Vumela umcabango wakho uphume udale ibhokisi lethu elihlotshisiwe lokhuni
Enza ngendlela oyifisayo ikhandlela nge-washi tape
Ubuciko obulula kakhulu ukukwenza nomndeni wonke. Hlobisa amakhandlela nge-washi tape nomcabango omncane.
Hlobisa ukhuni nge-pyrograph
Ukuhlobisa nge-pyrograph. Okuthunyelwe kufundisa ukuthi ungenza kanjani umhlobiso wesitayela se-rustic oqoshwe nge-pyrograph.
Izimbali zeCrepe ukuhlobisa
I-DIY yokuthi ungazenza kanjani izimbali ngephepha le-crepe noma le-crepe ukuhlobisa.
Penda amatshe ukuhlobisa
Indatshana ye-DIY yokuhlobisa ngamatshe omfula noma olwandle. Kulesi DIY sizothola amatshe aqoshwe ngemidwebo yejometri ukuhlobisa.
Yenza imbiza ngebhodlela elenziwe kabusha
Isifundo sendlela yokumodela ibhodlela lepulasitiki ngokushisa kwensimbi ukuthola ibhodlela lokugcina izimonyo esizisebenzisa nsuku zonke.
Ibhokisi elihlotshiswe nge-rhinestone noma ingilazi yobuhlalu
Okokufundisa kokuthi ungenza kanjani ngokwezifiso noma uguqule ibhokisi lamapulangwe noma lamakhadibhodi ngamatshe ambalwa nje obucwebe noma ubuhlalu beglasi. Kuyindlela elula yokwenza i-DIY
Imbali yephepha njengomhlobiso
Indatshana ye-DIY emayelana nemihlobiso yephathi lephepha. Kulesi sihloko uzothola umbono wokwenza imbali enhle yephepha ukuhlobisa nokusetha indawo
Ukusonga incwadi ngomsebenzi kaFuroshiki
I-athikili mayelana nenqubo yasendulo ye-furoshiki noma ubuciko bokusonga izipho ngamaduku. Kulesi sifundo, sichaza ukuthi singayisonga kanjani incwadi.
Imibono yokwenza ngezifiso amabhokisi ezipho
I-athikili ye-DIY ekhombisa izinketho ezahlukahlukene zokwenza ngokwezifiso ibhokisi lesipho. Umbono omuhle ongawusebenzisa ngoKhisimusi, izinsuku zokuzalwa, usuku lomama ...
Iqhwa leqhwa ukuhlobisa amafasitela
I-athikili ngomhlobiso kaKhisimusi. Kulesi DIY siphakamisa umbono wokwenza ithempulethi yakho ukuhlobisa amafasitela ngesifutho seqhwa.
Izindandatho ziyinto yokuhlobisa yezandla zabo bonke abesifazane nabanye besilisa, ngakho-ke namuhla sikufundisa ukuthi ungazenza kanjani zibe lula kakhulu ngezinkinobho.
Umhlobiso ngezinsimbi zobumba
Emnyango wangaphambili kuvamile ukubeka izinsimbi ezithile ukwazi ukuthi ngubani ongena endlini, namhlanje sikukhombisa ukuthi ungazenza kanjani ngezinto ezingasetshenziswa kabusha.
Isitsha samasongo omshado
Kulesi sihloko sikukhombisa isitsha sokuqala noma ipuleti ukuze ukwazi ukuhambisa amasongo kamakoti nomkhwenyana e-altare esikhundleni somcamelo ojwayelekile ohlotshisiwe.
Hlobisa ngezinto ezenziwe ngoboya
I-athikili yokuthi ungazenza kanjani izinto ngoboya nangeglue. Ngezansi ungabona ukuthi ungayenza kanjani i-vase encane.
I-coaster eyenziwe ngamathayili
Isikebhe esheshayo nesilula sokwenza ama-coasters ngokuvuselela amathayela.
Enza ngendlela oyifisayo ipeni eline-CD
Isifundo sendlela yokuphinda uhlobise ipeni usebenzisa i-CD endala. Sizosebenzisa iteyipu ukuze ukusikeka kwe-CD kube kuhle futhi sizokunamathela esibayeni
Amapuleti ahlotshiswe i-halloween
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungazisebenzisa kanjani izitsha zephathi ze-Halloween ukuze babe nokuvumelana kakhulu ngaleli holide.
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iminsalo emincane ye-confetti enhle. Ngale ndlela uzoba nomhlobiso owenzelwe wena ngezipho zakho eziseduze.
Ilambu elenziwe ngebhodlela lepulasitiki elibuye lisetshenziswe kabusha
Isifundo (DIY) sendlela yokwenza isibani ngokusebenzisa kabusha ibhodlela lepulasitiki nokusebenzisa upende wokufafaza, isibani sesibani nesembozo samakhukhi.
I-DIY: Hlobisa amabhodlela nge-washitape
I-DIY esikhombisa umbono wokuphinda usebenzise amabhodlela engilazi, ubanikeze umsebenzi omusha, futhi uwahlobise nge-washitape.
I-DIY: Abanikazi bamakhandlela basebenzisa kabusha amabhodlela
I-DIY yokuthi ungenza kanjani isibambo sekhandlela usebenzisa i-aluminium ucingo namabhodlela. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukwenza ngendlela oyithandayo ngokuthinta okumbalwa kopende
Izinhlamvu zekhadibhodi ezigcwele
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungalihlobisa kanjani ikamelo lomntwana ngezinhlamvu ezilula zamakhadibhodi ezigcwele iziqephu zendwangu.
Ama-coasters anezinkuni zokhuni
Kulesi sihloko sikulethela ubuciko obuhle kakhulu futhi obunemibala. Amanye ama-coasters anamabhuloki okhuni ukuhlobisa itafula lakho ekuqaleni.
I-DIY: I-Arale brooch eyenziwe nge-fimo (UDkt Slump)
I-athikili ka-DIY yokuthi ungayenza kanjani i-brooch yomlingiswa u-Arale ochungechungeni lwe-anime i-DR. Islump senziwe kuma-80s ngu-Akira Toriyama.
Ipensela enebhulokhi lamapulangwe
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ipensela yasekuqaleni futhi eyingqayizivele ngebhulokhi elilula lokhuni. Ngakho-ke, uzoba namapensela agcinwe kahle.
Izidleke zezinyoni zokuhlobisa ikhaya
Izidleke zezinyoni zihlala zihlobisa kahle ekhaya, kepha ezangempela ziyaxaka kakhulu. Ngakho-ke, sethula lena yezangaphakathi.
I-DIY: Umgexo wetshe lolwandle
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani umgexo omuhle ngamatshe asogwini. Ubuciko obuhle ehlobo.
I-DIY: Amasongo enenjoloba ye-eva
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungazenza kanjani izinsimbi ezinhle nezangempela nge-eva rubber. Okukhethekile kuleli hlobo.
Amabhokisi ezicathulo awasebenziseki neze kwabaningi bethu, kepha namhlanje sikukhombisa indlela enhle yokuphinda uzisebenzise ukuze zenze izithombe.
Ungomisa kanjani izimbali nge-glycerin
I-DIY yokuthi ungomisa kanjani izimbali nge-glycerin futhi uzenze zibukeke zingcono kunokumiswa okujwayelekile.
Izilwane zasolwandle ngephepha langasese
Kulesi sihloko sikukhombisa ezinye izilwane zasolwandle ezinhle ezenziwe ngephepha langasese. Ubuciko obuhle bokuchitha intambama nezingane.